QIIMAYN: Lionel Messi, Eden Hazard, Joao Felix – Ciyaartoyda Ugu Qiimaha Badan Horyaalka LaLiga Oo La Shaaciyey | Saxil News Network
QIIMAYN: Lionel Messi, Eden Hazard, Joao Felix – Ciyaartoyda Ugu Qiimaha Badan Horyaalka LaLiga Oo La Shaaciyey
Lionel Messi maaha ciyaartoyga ugu qiimaha badan ee ka ciyaara horyaalka waddanka Spain ee LaLiga, waxaana hadda booskaas ku fadhiya laacib da’yar oo horeba lacag badan ay kooxda uu ka tirsan yahay ugu soo iibsatay.
Xiddiga reer Argentina oo 33 jir ah, ayaa loo tirinayaa in hoos u dhac ku yimid qaab ciyaareedkiisa iyo badqabkiisii ciyaareed intaba, waxaana inkasta oo uu haddana hormood u yahay kooxdiisu uu lumiyey booskii uu beryaha qaarkood kalida ku ahaa ee ciyaaartoyga ugu qiimaha badan.
Laacibkan ayaa markii ugu horreysay muddo 10 sannadood ah, waxa qiimayntiisa suuqu ay ka hoosaysaa €100 milyan oo Euro, sida uu ay shabakadda qiimaynta iyo xogta ee Transfermarkt ay shaacisay.
“Messi hoos ayuu u dhacayaa, waxaanu gelayaa sannadihii ugu dambaysay xirfaddiisa, kooxda Barcelona na waxay ku jirtaa qalalaase.” Sidaas waxa yidhi Tobias Blaseio oo Transfermarkt la hadlayay, isla markaana sharraxayay sida uu hoos ugu dhacay qiimaha laacibkan.
Da’yarka reer Portugal ee afka hore uga ciyaara Atletico Madrid ee Joao Flex ayaa kaalinta koowaad kaga jira qiimaha ciyaartoyda ka dheesha horyaalka waddanka Spain ee LaLiga, waxaana uu suuqa iibka ciyaartoyda ka marayaa £90 milyan oo Euro oo u dhiganta 100 milyan oo Euro.
Jan Oblak oo isaguna Atletico Madrid ka tirsan ayaa kaalinta labaad soo galay, waxaana uu qiimihiisu yahay £81 milyan oo Euro.
Ciyaartoyga ugu qiimaha sarreeya Barcelona ayaa waxa uu yahay da’yarka reer Spain ee Ansu Fati oo £72 milyan oo Gini qiimihiisu yahay, waxaana afraad soo galay Lionel Messi oo isaguna £72 milyan oo Gini taagan.
Goolhaye Thibaut Courtois ayaa noqday ciyaartoyga Real Madrid ugu qiimaha badan, waxaana uu taagan yahay £67.5 milyan oo Gini.
Halkan kaga bogo ciyaartoyda ugu qiimaha badan horyaalka LaLiga:
25. Lucas Ocampos (Sevilla) – £40.50m
24. Eden Hazard (Real Madrid) – £45.00m
23. Pedri (Barcelona) – £45.00m
22. Marcos Llorente (Atletico Madrid) – £45.00m
21. Jules Kounde (Sevilla) – £45.00m
20 Toni Kroos (Real Madrid) – £45.00m
19. Philippe Coutinho (Barcelona) – £45.00m
18. Diego Carlos (Sevilla) – £45.00m
17. Ousmane Dembele (Barcelona) – £45.00m
16. Pau Torres (Villarreal) – £45.00m
15. Saul Niguez (Atletico Madrid) – £54.00m
14. Koke (Atletico Madrid) – £54.00m
13. Antoine Griezmann (Barcelona) – £54.00m
12. Jose Gimenez (Atletico Madrid) – £58.50m
11. Frenkie de Jong (Barcelona) – £58.50m
10. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) – £63.00m
9. Raphael Varane (Real Madrid) – £63.00m
8. Casemiro (Real Madrid) – £63.00m
7. Federico Valverde (Real Madrid) – £63.00m
6. Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) – £67.50m
5. Thibaut Courtois (Real Madrid) – £67.50m
4. Lionel Messi (Barcelona) – £72.00m
3. Ansu Fati (Barcelona) – £72.00m
2. Jan Oblak (Atletico Madrid) – £81.00m
1. Joao Felix (Atletico Madrid) – £90.00m